कुखुरी काँः एउटा फरक रेष्टुरेन्ट - Naya Online
नयाँ अन्लाईन बिहिबार, चैत्र १४, २०७५ (March 28th, 2019 at 8:09am ) बिजनेस
कुखुरी काँ लोकेशनको आइडेन्टिटी नै बनेको छ
डेनी लिम्बू, प्रोप्राइटर
यस्तो राम्रो रेष्टुरेन्ट खोलेर बस्नुभएको रहेछ, कतिको सफल हुनुहुन्छ ?
धेरै त नभनौ तर राम्रै छ । चलिरहेकै छ ।
म यहाँ जाडोको समयमा तोङ्वा पिउन आइरहन्छु । यहाँको तोङ्वा आफै उत्पादन गर्नुभएको हुँदा एकदम मीठो र स्वस्थ छ ।
सुर्य चेम्जोङ (अध्यक्ष, याक्थुङ मुनचइत चोकसयङ)
रेष्टुरेन्टहरू त धेरै नै छन् अरु रेष्टुरेन्ट र यो रेष्टुरेन्टको समानता र भिन्नताको विषयमा बताइदिनोस् न ?
भिन्नताको विषयमा भन्नुपर्दा खानाको स्वाद अलि फरक छ । यहाँको सुविधाको हिसाबले पनि सबै कुरामा सहज छ । छिटो सर्भिस हुन्छ ।
रेष्टुरेन्ट खोल्नुभएको कति भयो ?
लगभग साढे ३ वर्ष जति भयो ।
म यहाँको नियमित ग्राहक हुँ । यहाँको मलाई सबैभन्दा मनपर्ने डिसमा थुक्पा पर्छ ।
लक्ष्मी योङ्हाङ (नायिका/गायिका)
यहाँको सबैभन्दा मीठो खानेकुरा चाहिँ के होला ?
यहाँ धेरै जाने भनेको तोङ्वा र सेकुवा हो । अरु पनि राम्ररी नै गइरहेको हुन्छ तर ग्राहकहरूको कमेन्ट अनुसार चाहिँ तोङ्वा नै हो । अर्गानिक तोङ्वा हुन्छ, पेट, टाउको दुखाउँदैन । अहिलेसम्म खानेकुरामा त्यत्ति ठूला कम्प्लेन आएको छैन ।
म यहाँको नियमित ग्राहक हुँ । टाढाबाट यहाँसम्म आइरहनु यहाँको परिकारले नै हो ।
रुपा आङबुहाङ (अध्यक्ष, याक्थुङ हाक्पारे पालाम सयङ)
दिनमा कतिजति ग्राहकहरू आउनुहन्छ ?
विजनेस हो तलमथि त हुन्छ नै तर सन्तोषजनक नै छ अहिलेसम्म । जे होस् आउनुहुन्छ ।
म यहाँको नियमित ग्राहक हुँ । म आफ्नो साथीभाई, इष्टमित्रसहित आउने गर्दछु । यहाँको स्वादिष्ट परिकारहरूले मनै लोभ्याउँछ
देसु सुहाङ (गायिका)
यहाँको कुन खानामा नकरात्मक प्रतिक्रिया आउने गर्छ ?
खानामा भन्दा पनि मैले आजसम्म सुनेको नराम्रो प्रतिक्रियामा पार्किङको असुविधा हो । वाइकको लागि छ तर चारचक्के गाडीहरूको लागि चाहिँ अलि असुविधा छ । हुन त बाटो परेको हुँदा खासै समस्या त हुँदैन तैपनि बाटोमा पार्किङ गर्दा कतै गाडीहरू स्क्रयाच गरिदेलान् कि भन्ने मात्रै हो खानामा अलि पिरो अमिलो चिल्लोमा हल्का कमेन्ट आएबाहेक आएको छैन ।
म त न्यु कुखुरी काँ नियमित आइरहन्छु । सबै डीस राम्रो छ तर स्पेसल्ली मलाई यहाँको सुप मम र सेकुवा एकदम मीठो लाग्छ ।
बबिता फोम्बो, नायिका
तपाइँको रेष्टुरेन्टको नाम ‘कुखुरी काँ’ अलि युनिक छ नि ? कसरी जुराउनुभयो ?
यो नाम अलि कमेडी, एकपटक सुनपछि नबिर्सिने खालको छ । सुरुमा त म आफैले पनि नाम चेन्ज गर्नुपर्ला भनेर सोचेको थिएँ तर छिमेकीहरूले यो नाम चेन्ज नगर भन्ने सुझाव दिनुभयो । हुनपनि कुखुरी काँ लोकेशनको आइडेन्टी नै बनिसकेको रैछ ।
म त यहाँको रेगुलर कस्टमर हुँ । मलाई यहाँको पर्ने डीसमा तोङ्वा र लोकल कुखुराको सुप एकदमै मनपर्छ ।
मुस्कान राई, आर्ट डाइरेक्टर बेरीजोन एक्टीङ स्कुल
यसको शाखा खोल्ने तयारीमा हुनुहुन्न ?
शाखाको लागि एकदम दौडधुपमा छु । आजपनि भर्खरै पनि भैँसेपाटी गएको थिएँ । अलि शेयर होल्डरको समस्या छ । एक्लै चलाउन सकिन्न । तर अब चाडै नै शाखा खुल्छ ।
फरक स्वादका लागि कुखुरी काँ जाउन भन्ने ग्राहकको लागि तपाइँकोमा कस्तो सुविधा रहला त ?
खाना त सबैतिर एउटै हो, उस्तै हो । सर्भिस, टेष्ट र वातावरण फरक हुन सक्छ । र, यदि आउनुभयो भने सफा बातावरणमा हाइजेनिक खाना, तोङ्वा र सेकवा खान सक्नुहुनेछ । आउनुहोस् ट्राइ गर्नुहोस् भन्न चाहान्छु ।
आफ्नो कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
एकदम सन्तुष्ट छु ।
पूर्णबहादुर दर्लामी (ग्राहक बाग्लुङ)
म यो रेष्टुरेन्ट सुरु भएदेखि नै आएको हो । मेरो लागि यहाँको बेस्ट डिसमा तोङ्वा र सेकुवा पर्छ । एकमद मीठो छ नपत्याए एकपटक आएर चाख्नुहोस् ।
ग्राहक छिन्वीहाङ (ग्राहक, झापा)
म यस रेष्टुरेन्टमा आउन थालेको २ वर्षजति भयो । म भेजिटेरियन भएको हुँदा मलाई यहाँको मनपर्ने डिसमा भेज मम पर्छ । र, हुक्का पनि ठीक लाग्छ ।
राज राई (ग्राहक, झापा)
म यहाँको नियमित ग्राहक हँ । मेरो बेस्ट चाहिँ हुक्का र चिप्स चिल्ली हो । भेज मम पनि धेरै राम्रो पाइन्छ । यहाँको सर्भिसमा म एकदमै सन्तुष्ट छु ।